Vagadziri veWebhu maringe neVagadziri vewebhu Martech Zone
China, August 18, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Nguva dzose zvakanaka kuva nehumwe mune infographic. Uyu anoseka kunakidza pakati pevagadziri vesaiti uye vanogadzira masosi. Chokwadi chinotaurirwa, zvakadaro, ini ndinokoshesa mugadziri mukuru zvakanyanya senge ini ndinoita mushambadzi mukuru. Kune mamwe maficha akanaka kunze uko asina kugadzirwa zvakanaka asi anotengesa senge hotcake. Kune rimwe divi rakatarisana, kune anoshamisa maficha kunze uko asingatengese akakosha darn nekuti ivo vanongotaridza kunge vasina mufaro.
Webhu Dhizaini vs Webhu Vagadziri inounzwa kwauri neWix.com
Shandisa dhizaini yekugadzira kugadzira Mahara Webhusaiti.
Aug 18, 2011 na4:58 PM
Ichi ndicho chimwe chezvandinoda nguva dzose. Ndakatanga kuona uyu Mbudzi wegore rapfuura. Waita zvakanaka!